Umbuzo: Uzinyibilikisa Njani Intlanzi Ekhenkcezisiweyo Emanzini-UkuHamba ngebhayisekile
Ikhaya » Zomxube » Umbuzo: Uzinyibilikisa Njani Intlanzi Ekhenkcezisiweyo Emanzini
Yeyiphi eyona ndlela ingcono yokunyibilikisa iintlanzi ezikhenkcezisiweyo emanzini?
Uyinyibilikisa njani intlanzi ekhenkcezisiweyo ngokukhawuleza?
Uyinyibilikisa njani intlanzi?
Ingaba intlanzi ilungile ixesha elingakanani xa ikhenkceziswe emanzini?
Ngaba ungayinyibilikisa intlanzi emanzini abandayo?
Kutheni le nto kufuneka ndisuse iintlanzi kwiphakeji ngaphambi kokunyibilika?
Ngaba kubi ukunyibilikisa intlanzi emanzini ashushu?
Yeyiphi indlela ekhuselekileyo yokunyibilika kwintlanzi engumkhenkce?
Ngaba iintlanzi ezinqabileyo kufuneka zinyibilike ngaphambi kokupheka?
Ngaba kulungile ukupheka iintlanzi eziqingqiweyo?
Kutheni intlanzi ekhenkcezisiweyo inomushy?
Kuthatha ixesha elingakanani ukuze iintlanzi zikhuphe ubushushu begumbi?
Ungayitya iminyaka emibini enentlanzi efriziwe?
Kutheni unganyibiliki iintlanzi ngeplastiki?
Zinokuhlala ixesha elingakanani iintlanzi ezikhenkcezisiweyo?
Kutheni amanzi abandayo etshatyalaliswa ngokukhawuleza kunobushushu?
Ithatha ixesha elingakanani intlanzi ukunyibilika efrijini?
Ngaba ungazikhupha iintlanzi kwikhawuntara?
Indlela ekhawulezayo neyaziwayo yokuphelisa intlanzi emanzini abandayo. Intlanzi kufuneka ifakwe kwisingxobo esivaliweyo ukuze ikhuseleke kwaye igcine incasa, kwaye ifakwe emanzini de ibe yiqabaka. Yiyeke ide iphele. Ixesha le-Defrost lihlala iiyure ezintandathu ukuya kwezisibhozo ngelb nganye.
Izinto eziphambili eziThathayo Qala ngentlanzi engumkhenkce eqinile. Musa ukunyibilika kwangaphambili efrijini. Musa ukususa isingxobo sevacuum phambi kokuba unyibilike. Ukunyibilikisa iintlanzi “ze” ngaphantsi kwamanzi kuyenza ibemanzi. Sebenzisa amanzi etephu abandayo kuphela ukunyibilika njengoko oku kunciphisa umngcipheko wokukhula kwebhaktiriya. Sebenzisa intlanzi enyibilikisiweyo ngokukhawuleza ukuze uqinisekise iziphumo ezilungileyo!
Ukunyibilikisa intlanzi ngokukhawuleza, qala ubeke intlanzi kwisingxobo seplastiki esinokutywinwa kwaye utyhale wonke umoya ngaphandle kwayo ngaphambi kokuba utywine. Ukuba uzigcinile iinxalenye zakho zeentlanzi kwibhegi etywiniweyo unokuyishiya kwipakethe yakho. Emva kokuba i-defrosted soloko upheka intlanzi ngokukhawuleza. Yonwabela isidlo sakho seFishbox!!Jul 29, 2016.
Ukunyibilikisa Intlanzi efrijini Eyona ndlela ikhuselekileyo yokunyibilikisa intlanzi kukwenza oko kwisikhenkcezisi ngobusuku. 1 Yitshintshe nje kwisikhenkcisi uye efrijini phambi kokuba ulale kwaye iya kuba sele ilungele ukuphekwa ngosuku olulandelayo. Ukuba intlanzi yakho ivacuum itywiniwe, akufanele ube nexhala malunga nokuvuza.
Xa ukhenkceza intlanzi ngamanzi, intlanzi ebhityileyo isala ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-6 ngelixa intlanzi enamafutha isahlala ukuya kuthi ga kwiinyanga ezi-4. Ingaba usebenzisa amanzi okanye i-ice glazing ayilandi ixesha lokukhenkceza kodwa inokuchaphazela ukoma kunye nencasa yeentlanzi zakho xa uhlambalaza ukusebenzisa.
Indlela ekhawulezayo neyaziwayo yokuphelisa intlanzi emanzini abandayo. Intlanzi kufuneka ifakwe kwisingxobo esivaliweyo ukuze ikhuseleke kwaye igcine incasa, kwaye ifakwe emanzini de ibe yiqabaka. Yiyeke ide iphele.
Ukuze ubulale iibhaktheriya ezivelisa i-botulism, kubaluleke kakhulu ukususa i-vacuum packaging ngaphambi kokuba unyibilikise intlanzi yakho. Nje ukuba laa C. botulinum indala ichanabeke kwioksijini, ayizukwazi ukuvelisa ityhefu ebulalayo.
Amanzi abandayo e-ice akayi kutshabalalisa intlanzi ngokukhawuleza ngokwaneleyo kodwa amanzi ashushu okanye ashushu aya kuphazamisa ukuthungwa kwentlanzi (unaloo myalezo malunga nokuphepha utshintsho olubi kwiqondo lokushisa, akunjalo?). Kodwa yitshintshe yonke imizuzu engama-20 okanye engama-30 de intlanzi inyibilike ngokupheleleyo, ukuze uqinisekise ukuba amanzi ahlala epholile.
Eyona ndlela ilungileyo yokunyibilikisa ukutya kwaselwandle ngokuthe ngcembe, ngokuyibeka efrijini ngobusuku. Kuphephe ungcoliseko olunqamlezayo ngokubeka ukutya kwaselwandle okunyibilika kude kuzo naziphi na izinto ezintsha zemveliso. Ukuba ufuna ukunyibilikisa iqhekeza lentlanzi ngokukhawuleza, yibeke kwi-zip-top bag kwaye untywilisele emanzini abandayo.
Nangona kukho ezinye iintlobo zeentlanzi ezipheka kakuhle ngaphandle kokunyuswa (intlanzi ebhityileyo, njenge-tilapia kunye ne-cod, inokuhamba ngokuthe ngqo ukusuka efrijini ukuya kwi-pan yokugaya okanye i-sauté), kudla ngokufanelekileyo ukunyibilikisa ngokupheleleyo intlanzi ngaphambi kokupheka. Ngokuqinisekileyo, unokunyibilikisa iintlanzi ngokuthe ngcembe efrijini.
Ukupheka intlanzi ekhenkcezisiweyo? Ungatsiba inkqubo yokunyibilika ngokupheleleyo kwaye upheke intlanzi ekhenkcezisiweyo ngqo ukusuka kwisikhenkcisi. Kuya kufuneka wongeze imizuzu embalwa kwixesha lokupheka kwiresiphi yakho ukuze uphendule ngokunqongophala kokunyibilika, kodwa ungazingela, umphunga, ubhake, uqhole intlanzi eqhotsiweyo ngqo kwisikhenkcisi! Nge-2 kaMeyi, 2019.
I-Cheat Sheet ichaza ukuba iiseli ezikwintlanzi ziqulethe ulwelo, kwaye xa olo lwelo luba ngumkhenkce ludala iikristale zomkhenkce. Nje ukuba ezi kristale zomkhenkce zinyibilike, ulwelo lugalela kwintlanzi, nto leyo ekhokelela kungcoliseko lwe-mushy (nge-Spruce Eats). Ukuba ufuna ukuhambisa intlanzi yakho, qiniseka ukuba wenze njalo malunga nemizuzu engama-30.
Iintlanzi akufuneki zinyibilike kwiqondo lobushushu begumbi kuba amaqondo obushushu ashushu anokuvumela ukuba iibhaktheriya zikhule. Sebenzisa enye yezi ndlela zichazwe ngezantsi. Ixesha lokunyibilika: iiyure ezi-6 ukuya kwezi-24, kuxhomekeke kubungakanani. Ngokubanzi, iiyure ezi-6 ukuya kwezi-8 ngeponti nganye.
Nayiphi na intlanzi enomkhenkce okanye i-shellfish iya kukhuseleka ngonaphakade; nangona kunjalo, incasa kunye nokuthungwa kuya kuncipha emva kokugcinwa ixesha elide. Ngowona mgangatho uphezulu, yikhenkceza (0 °F / -17.8 °C okanye ngaphantsi) intlanzi ephekiweyo ukuya kutsho kwiinyanga ezi-3.
Ityhefu ibangela isifo esisongela ubomi esibizwa ngokuba yi-botulism. Ngokuvula ukupakishwa xa kunyibilika intlanzi epakishwe nge-vacuum, ioksijini ikhona kwaye i-spores ayiyi kuvelisa iiseli zezityalo ezivelisa i-toxin. IListeria monocytogenes yibhaktiriya ekwazi ukungcolisa ukutya.
Ungaze ushiye ukutya kwaselwandle okanye okunye ukutya okonakalayo kwifriji ngaphezulu kweeyure ezi-2 okanye ngaphezulu kweyure enye xa amaqondo obushushu engaphezulu kwe-1 ° F. Intsholongwane enokubangela ukugula ikhule ngokukhawuleza kumaqondo afudumeleyo ashushu (phakathi kwama-90 ° F kunye ne-40 ° F).
Amanzi ashushu kufuneka asoloko enyibilikisa izinto ngokukhawuleza kunamanzi abandayo. Kungenxa yokuba isantya sokuhamba kobushushu phakathi kwezinto ezimbini sihlala sikhula njengoko umahluko wobushushu phakathi kwazo ukhula.
Indlela yokuqhaqha iintlanzi kunye nokutya kwaselwandle. Eyona ndlela ingcono yokuqhaqha ukutya kwaselwandle okunomkhenkce ngokukhuselekileyo kukucotha kwisikhenkcisi. Oko kuthetha ukususa intlanzi yakho kwisikhenkcisi kwaye uyibeke efrijini ubusuku bonke, okanye malunga neeyure eziyi-12-18 ngokuxhomekeke kubungakanani beentlanzi okanye iifillet.
Eyona ndlela ikhuselekileyo yokunyibilikisa iintlanzi kukubeka efrijini. Musa: vumela intlanzi yakho inyibilike kwikhawuntara Ukusuka kwisikhenkcisi ukuya kwiqondo lobushushu begumbi akunakutshintsha nje ukumila kwentlanzi yakho, kodwa kunokukhokelela ekukhuleni kwebhaktiriya kwintlanzi yakho.
Umbuzo: Lixesha elingakanani ukuQinisa iiNtlanzi eziMkhenkce emanzini
Impendulo eKhawulezayo: Kuya kude kube nini ukunyibilika kwentlanzi ekhenkcezisiweyo kumanzi abandayo
Umbuzo: Ndingakwazi Ukunyibilikisa Intlanzi Engumkhenkce kwiMicrowave
Ndingakwazi Ukunyibilikisa Intlanzi Engumkhenkce kwiMicrowave
Umbuzo: Ndingakwazi Ukuyinyibilikisa Intlanzi Engumkhenkce
Umbuzo: Intlanzi Ekhenkcezisiweyo Yexesha Elingakanani
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ndingakwazi ukunyibilikisa iiNtlanzi eziMkhenkce ngaphandle
Umbuzo: Kuya kuthatha ixesha elingakanani ukunyibilika kwentlanzi ekhenkcezisiweyo
Impendulo eKhawulezayo: Ngaba ndinganyibilika iiFillet zeNtlanzi eziQinisekileyo kwiVenkile yokutya
Impendulo eKhawulezayo: Ungayinyibilikisa ixesha elingakanani Intlanzi eQinisekileyo
Umbuzo: Uyinyibilikisa ixesha elingakanani Intlanzi Ekhenkcezisiweyo
Umbuzo: Lixesha elingakanani Intlanzi Engumkhenkce ukuze Inyibilike